Kubhejera Kupindwa Muropa Chirongwa Chirongwa Sarudzo - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
Kubhejera kunogona kuve kunakidza kamwe-mu-nguva-chiitiko kana, kune vane rombo vashoma, nzira yekukunda iyo isina kujairika jackpot. Nehurombo, vanobhejera vanogona kuve vanoona zvakanyanya uye vanomanikidza pamusoro pekuridza makona kana kudhonza iro ranga rakabata zvombo. Ivo vanogona kuzviwana ivo vamene vari mumapipi ekupindwa muropa kunogona kuvakuvadza mune zvemari, mune zvemagariro, mune zvepfungwa kana kunyange mumuviri.
IAmerican Gaming Association inofungidzira kuti vangangoita 1 muzana yevaAmerican vanogona kunge vari vabhejeri vezvirwere. Kana iwe ukazviwana iwe uri mune ino inoshungurudza mamiriro, kune kubhejera kupindwa muropa chirongwa chirongwa sarudzo izvo zvinogona kuita mutsauko muhupenyu hwako. Tiri pano kuzobatsira uye kuda kukutsigira iwe paunotora rwendo rwako rwakakosha kudzokera kuhupenyu husina kupindwa muropa; tifonere 24/7 nhasi kuti utange.
Chii Chinokonzera Kubhejera Kupindwa Muropa?
Kupindwa muropa, zvisinei nechero chinhu kana chiito, vese vanowana yavo yakakonzera mu psychology. Saka, chii chinokonzera kupindwa muropa nokubhejera? Nepo vanhu vazhinji vanogona kutanga kuita kana kutora chimwe chinhu setsika, chinzvimbo chekupindwa muropa kana munhu iyeye achinge achivimba nepfungwa. Zvichitaurwa zvakapusa, kupindwa muropa ndipo paunotadza kumira kuita chimwe chinhu nekusarudza wega nekuti iwe unoda iyo yakakwira, mhedzisiro kana kuzadzisa kwazvinopa. Vanobhejera Anonymous anotsanangura kuti vanobhejera vanowanzoona kuti vanogona kudzora zviitwa zvavo asi vachimanikidzwa kubhejera vanodzorwa navo pachinzvimbo. Izvi ndizvo chaizvo: Kunyange pasina munhu anosarudza kupindwa muropa, zvakakosha kuti usarudze nguva yekusiya yakabata.
Kana iwe ukava muropa pakubhejera, hupenyu hwako hwese hunogona kukanganiswa. Unogona kusangana nekuparara kwemari, kurasikirwa nemba yako kana bhizinesi nekuda kwezvikwereti zvekubhejera, kupera kwemuchato kana kurasikirwa kwekuchengetwa kwevana, kana kudzikira kwako kunogona kukutungamira kune kumwe kupindwa muropa uye kurwara kwepfungwa. Ichi ndicho chikonzero zvakakosha kuti uzive dambudziko nekukurumidza, saka unogona kuwana rubatsiro pakurapa kubheja kupindwa muropa.
Mukuwedzera, zviri nyore kupfuura nakare kose kuva mubhejeri nhasi. Casinos irikubuda munzvimbo dzakawanda uye dzakawanda, uye kune mukana wakagadzirira kuwana nzvimbo zhinji dzemitambo online. Usarega kupinda kuri nyore kuchikutungamira iwe kana vadiwa vako kune kwakadzika kwekusuwa. Pane kudaro, titishevedze nhasi kuti uwane zvimwe nezve kurapwa, zvivakwa uye mapoka ari padyo newe. Isu tinowanikwa chero nguva kana iwe uchifona.
Pane Mushonga Wokubhejera Here?
Zvirwere zvepfungwa, senge obsessive-inomanikidza kusagadzikana kana anorexia, haina mugumo kwavanonzi vapora. KuGamblers Anonymous, nhengo dzinosvika pakuziva kuti izvi ndezvechokwadi nezvekurwara kwavo futi. Pane mushonga wekubhejera here? Kwete. Asi sekumwe kumwe kupindwa muropa, matanho anogona kutorwa kudzora kubata kwekubhejera kuri pamusoro pehupenyu hwako kana neupenyu hwehama dzako. Kunyangwe iwe uchibheja nguva dzese uye usingakwanise kumira kana kuenda pamabhangi anotenderera kunze kwekudzora, iyo nguva yekutsvaga rubatsiro ikozvino.
Kurapa kwevanobhejera kumhanyisa iyo gamut kubva kune zvakanyanya kurapwa kurapwa kusvika kune-based-group kupora. Kubhejera kuputi kurapa zvirongwa hazvisi-size imwe-inokodzera-zvese zvinotsanangurwa; pachinzvimbo, iwe unofanirwa kuzvidzidzisa pachako pane sarudzo dziripo iwe nemhuri yako, kuti iwe ugone kuita sarudzo yakanaka inotungamira kumhedzisiro yakanakira munhu wese anenge achibatanidzwa.
Cognitive Behaeveal Therapy Kurapa
Kufungisisa kwehunhu-kurapa kwekurapa zvikamu zvakaratidza kuvimbisa mhedzisiro mukutarisana nemhando dzakasiyana dzekupindwa muropa, kusanganisira kubhejera. Nokurapwa uku, nyanzvi yehutano hwepfungwa inogona kubatsira muropa kuti aone maitiro ekufunga akatungamira mukumanikidza kubheja tsika. Semuenzaniso, vabhejeri vazhinji vanosvika pakufunga kuti kana vakangoramba vachibhejera kwenguva yakati rebei, zvirokwazvo vanohwina jackpot hombe yavave vachidzingirira. Panzvimbo pechiroto cheupfumi, vamwe vanobhejera vacharamba varipo, vachitarisira kuti kuhwina mune ramangwana kuchabhadhara zvikwereti zvavo zvekare.
Nekuda kwehunhu hwepfungwa hwekupindwa muropa nekubhejera, hunhu hwekubheja hunogona kuuya kuzere zvizere pakakwirira kwemakadhi uye mapfumo ekurasikirwa nemisodzi. Nekuziva kwehunhu hwekuzvibata, munhu anobhejera anogona kutanga kuona zvisirizvo uye ozvibata kuti azvigadzirise. Kana izvi zvinangwa zvikatarwa zvobva zvagadziriswa, iwe kana mudiwa wako munogona kutanga nzira yekupora.
Dzimwe Nzira Dzokurapa
Kubhejera kupindwa muropa chirongwa chekurapa chinosanganisira dzimwe nzira dzekurapa zvakare. Psychotherapy, kana tsika yekubata nekubhejera inokonzeresa kuburikidza neyemunhu uye mapoka mapoka mazano, zvinogona kutungamira kumazhinji mhedzisiro yakafanana nekuziva maitiro ekurapa, kusanganisira kuzvitsaura zvinokonzeresa uye kudzosera kusanzwisisika.
Kurapa kwemhuri kunogona kubatsira kune anopindwa muropa. Paunomanikidza kubhejera, ingangoita mhuri yako zvakare. Kurapa kwemhuri kunogadzirisa kwete chete nyaya yekubhejera pachayo asiwo inobata nekuporesa hukama hwemhuri uye kufambira mberi munzira yekudzokorora pamwe chete.
Chikamu chakakosha chekurapa kubhejera chinogonawo kuve kudzikisira kwekupinda mikana yekubheja. Izvi zvinogona kuoma; vanhu vazhinji havagone kudzivirira kuratidzwa kuhofisi Super Bowl dziva kana kubhejera kushambadzira uko kunowanikwa muInternet. Asi nekukanganisa kudzikira kune izvo zviri pachena uye zvinowanikwa nzira, akapindwa muropa nokubhejera anogona kutanga kutarisa maitiro avo ekumanikidza kana ekumanikidza, pane kubata chete nekudzivirira.
Kwekugara Inpatient Kubhejera Kupindwa Muropa Ma Centres
Kana iwe kana mudiwa wako akapindwa muropa nokubhejera uye kupindwa muropa kwakakonzera kusarongeka kwehupenyu uye mhedzisiro, nzvimbo dzekugara kana dzekupaza kubhejera nzvimbo dzekurapa dzinogona kunge dziri sarudzo yakanakira kupora kwako.
Zvakanakira Zvekugara Zvinobhejera Kurapa
Izvo zvakanakira zvekugara kubhejera kurapwa zvinogona kusvika kure kure kunze kwekunze kutarisirwa nekuti varwere varipo kutarisa nezvekupora pasina ruzha rwezuva nezuva. Iyo National Council pamusoro Dambudziko Kubhejera inofungidzira izvi zvakanaka:
Zvirongwa zvekubata zvepfungwa uye maitiro maitiro
Kurapa pamwe chete kwezvirwere zvinosanganisirwa
Kurapa uye kwepfungwa kutarisa
Anobhejera Kubhejera Kupindwa Muropa Nzvimbo
Vakuru-vanogadzira vane mukurumbira pane yekubhejera chiitiko, uye vanosangana nenyaya dzakafanana dzekupindwa muropa nevari kubhejera. Musiyano, zvirokwazvo, ndiko kugona kwemimwe menyu yezvisarudzo kuwedzera kune zvechipatara zvokurapa zvinopihwa. Semuenzaniso, nzvimbo dzepamberi pakubhejera kupindwa muropa nemahara zvinogona kupa spa-zvinowanika zvinosanganisira massage, dziva uye inopisa tub kuwanikwa, uye yakawedzera kuzadza. Pakupedzisira, vakapfuma vekubhejera vakapfuma vanogamuchira mhando dzakafanana dzekurapa kwepfungwa kunge munhu wese wese; vanongoita saizvozvo mumamiriro ekufananidza nenzvimbo yekutandarira kupfuura nzvimbo yechipatara.
Kubatsira kumwe pamusoro pezvimwe nzvimbo izvo zvinodhura kubhejera zvinodhaka zvivakwa zvinogona kuve nazvo, zvakadaro, zvinowedzera kuwanikwa kune vekurapa uye vehutano hwepfungwa vashandi. Vanhu vanokwanisa kubhadhara yakawanda vanogona kuonekwawo zvakanyanya, uye izvi zvinogona kutungamira kupora nekukurumidza dzimwe nguva.
Executive Kubhejera Kupindwa Muropa Zvirongwa
Mapurogiramu akakwenenzverwa ekubhejera anopindwa muropa nevashandi vane hunyanzvi vanoziva kuti inguva yekuchinja maitiro avo ekuparadza, asi avo vasina mukana wekushandisa nguva yakawandisa kure nebasa ravo. Aya mahunyanzvi, avo, sevakakwira-rollers, vanogona kubhadhara zvakanyanya kurapwa kwavo, vanogona kuwana zvirongwa zvakapfupikiswa, senge zvirongwa zvevhiki-chete. Zvirongwa zvinogona kuve zvakasarudzika kubata kupindwa muropa kwavo vachivabvumidza kutora chikamu chezuva nezuva kwezviitiko zvebhizinesi ravo repamusoro.
Outpatient Kubhejera Rehab uye Kurapa Zvirongwa
Outpatient kubhejera rehab uye zvirongwa zvekurapa zvinogona kubva kumapoka akaita seMabheji Asingazivikanwe ekutarisirwa kwemapoka eboka kuti aenderere mberi kurapwa kwemunhu. Zvizhinji zvezvinhu zvinogona kuitwa pane inpatient hwaro zvinogona kuitwawo mukati mekunze kurongedzwa. Musiyano uripo pakati pezvirongwa zvekurapa kwepasipoti uye wekunze ndizvo zvakanyanya kureba kwenguva inopedzerwa pakurapa. Zvirongwa zvizhinji zvekurapwa kwepfungwa zvinosanganisira kurapwa kwekunze mushure mekusunungurwa kwemurwere. National Council pane Dambudziko Kubhejera inokurudzira kushandisa nzira dzinotevera kuti uwane yakakodzera kubhejera kuputi kurapwa chirongwa iwe kana mudiwa wako:
Nzvimbo yakatenderwa nevashandi vakazara uye vane marezinesi
Zvirongwa zvakarongedzwa kubhejera zvinodhaka zvinodhaka
Basa revapi vezenji vanobvumidzwa kubhejera
Imwe yeanozivikanwa kuzivikanwa kunze kwekunze kubhejera protocol inofambiswa neVabhejeri Asingazivikanwe uye kubva pachirongwa chegumi nematanhatu chiitiko chakafanana neicho chinoshandiswa neAlcoholics Anonymous uye Narcotic Anonymous. Vanobhejera Anishuwa anoshanda nevanopindwa muropa avo vanobvuma kune dambudziko ravo uye vanotsvaga kugadzirisa sezvo vachishandawo kuti vapore kubva mukubhejera. Sangano iri, iro rinochengetedza ruzivo rwese rwunogovaniswa mukati memisangano yakavanzika yemisangano, rinoshanda kuunza vanobhejera vachangobvumirwa kunzvimbo kwavanogona kuenderera mberi nehupenyu hwavo, kudzorera kune chero munhu akuvadzwa nekwavo kubhejera uye obva abatsira savamwe vari munzira imwe chete.
Kana iwe kana munhu waunoda waona kupindwa muropa nekubhejera, tinogona kukubatsira iwe kuwana yemunharaunda Vanobhejera Misangano isingazivikanwe, zvipatara zvinorapa kana zvirongwa zvekurapa. Fonera nhasi kuti udimbure ngetani dzekubhejera pahupenyu hwako uye utange kushandira kune hunhu. Isu takarovedza vashandi vanowanikwa 24/7 kuti vabatsire nezvido zvako paunodana.
Kurapa uye Kupfuura-iyo-Counter Mishonga
Mishonga dzimwe nguva inogona kuve yakakosha chikamu cheiyi kubhejera yekuwedzera protocol. Kana iwe kana mumwe munhu mumhuri yako achibhejera zvakamanikidzwa, chenjera uye shandisa iwo chete mishonga iyo yakarairwa kana kukurudzirwa nanyanzvi inokwanisa. Paunenge uchidzorwa nekumwe kupindwa muropa, zvese zviri nyore kwazvo kuwira mune imwe kuburikidza nekuzvirapa pachako. Nekudaro, mishonga yakatemwa uye inotariswa nachiremba wako inogona kubatsira mukupora kwako kwese.
Yunivhesiti yeMinnesota yakapedza kudzidza makore akati wandei apfuura kuti aongorore kukanganiswa kwemaitiro akadaro ekurapa. Vadzidzi varo vekudzidza vakawira mumapoka maviri: avo vane kudzikisira kwekudzora uye avo vanokundwa nekumanikidza maitiro. Panyaya yevanomanikidzira kubhejera, mishonga inowanzo shandiswa muzvirongwa zvekushandisa zvinodhaka, senge naltrexone, yakawanikwa iine hunhu hwakanaka. Kune vanobhejera vane yakadzvinyirirwa yekudzora, iyo ongororo yakaongorora zvinhu zvinokanganisa prefrontal cortex yeuropi. Chirongwa chako chakasarudzwa chekurapa chinogona kubatsira kuona sarudzo dzakanakisa dzemamiriro ako ezvinhu.
Maitiro Ekuwana Nzvimbo Yakanakisisa Yekubhejera Kupindwa Muropa Nzvimbo
Kuwana chaiyo kubhejera kupindwa muropa chirongwa chako iwe kana wako waunoda inogona kuve yakareba maitiro. Tinogona kubatsira. Vashandi vedu vanokwanisa kukurukura mamiriro ako akasarudzika uye nekukubatsira kuti uone chirongwa kana nzira dzekurapa dzinogona kubatsira iwe nemhuri yako kupukunyuka kubva pakubhejera kupindwa muropa. Saka, tishevedze nhasi ku, kurukura zvaunogona kuita nemumwe wevanachipangamazano vedu vanoziva, uye tanga rwendo rwekudzokera kuhupenyu husina kupindwa muropa.
Psychic coupons ari pano:
1 Chii Chinokonzera Kubhejera Kupindwa Muropa?
2 Pane Mushonga Wokubhejera Here?
3 Kurapa kweVabhejeri
4 Cognitive Behaeveal Therapy Kurapa
5 Dzimwe Nzira Dzokurapa
6 Kwekugara Inpatient Kubhejera Kupindwa Muropa Ma Centres
7 Zvakanakira Zvekugara Zvinobhejera Kurapa
8 Anobhejera Kubhejera Kupindwa Muropa Nzvimbo
9 Executive Kubhejera Kupindwa Muropa Zvirongwa
10 Outpatient Kubhejera Rehab uye Kurapa Zvirongwa
11 Kurapa uye Kupfuura-iyo-Counter Mishonga
12 Maitiro Ekuwana Nzvimbo Yakanakisisa Yekubhejera Kupindwa Muropa Nzvimbo
13 Psychic coupons ari pano: